လေဆာဂဟေဆော်စက် မှအကောင်းဆုံး လေဆာဂဟေဆော်စက် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း, ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ပို့ကုန်အတွက်အသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံလူကြိုက်များ Taiwan။ အင်အားကြီးဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်နှင့်လိမ္မာအလုပ်ရှင်များမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လေဆာဂဟေဆော်စက် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်ရှိသည်။ အခမဲ့ခံစားရ ကျေးဇူးပြု. ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ထုတ်ကုန်သူတို့ကိုကြည့်ဖမ်းမျက်စိတစ်စေတောက်ပသောအရောင်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်လာတတ်ကြတယ်။ ငါတို့သည်ဤ Win-Win အခြေအနေအောင်မြင်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ရှင်းလင်းသောပညာသည်သင့်ကိုငါတို့ join မှကြိုဆိုပါတယ်ကြသည်!
ပုံစံ - OPT-RW1000
စက်သည်အရည်အသွေးမြင့်လေဆာရောင်ခြည်နှင့်အတူကီလိုဝပ်မြင့်စွမ်းအားဖိုင်ဘာလေဆာအရင်းအမြစ်ကိုလက်ခံသည်,တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကင်းလွတ်ခွင့်.အပြည့်အ ၀ ဖုံးအုပ်ထားသောဒီဇိုင်းသည်လေဆာအရင်းအမြစ်၏တံဆိပ်ခတ်နိုင်စွမ်းနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေနိုင်သည်.
အထူးလေဆာရောင်ခြည်ထုတ်စက်ကိုခေါင်းနှင့်လေနှင့်ဆက်စပ်သော coaxial နှင့် sidehaft ဓာတ်ငွေ့ကာကွယ်မှုစနစ်များတပ်ဆင်ထားသည်,နိုက်ထရိုဂျင်ကာကွယ်ထားသော nozzle ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းများကိုအစက်အပြောက်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ချုပ်ခြင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်.
ကျွန်ုပ်တို့သည် coaxial CCD စောင့်ကြည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုသည်.မော်နီတာကိုအော်ပရေတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်&တောင်ကြီးမြို့;s table သည် welding alignment နှင့် workpiece ၏ welding အရည်အသွေးကိုစောင့်ကြည့်သည်.
တင်သွင်းခြယ်လှယ်,အကြီးမားဆုံးလက်မောင်းအရှည်မှာ ၂၁၀၀mm ဖြစ်သည်,ခြောက်နိုင်သည်-ဝင်ရိုးချိတ်ဆက်,မည်သည့်နေရာ၌မဆိုစီမံကိန်းဂဟေဆော်ခြင်းကိုပြီးမြောက်စေနိုင်သည်,လမ်းကြောင်းနှင့်ထောင့်.ဥပမာ,အမှတ်,မျဥ်းဖြောင့်,ပတ်ပတ်လည်,စတုရန်း,အခြားပြားချပ်ချပ်ပုံများနှင့်အာကာသသုံးဖက်မြင်လမ်းကြောင်းသုံးဂဟေဆော်ခြင်း;optional နှစ်ခုဘူတာရုံဂဟေဆော် function ကို.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/laser-welding-machine.html
အကောင်းဆုံး လေဆာဂဟေဆော်စက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် လေဆာဂဟေဆော်စက် ၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊